IGoodData: I-SaaS Ekufuneni Ubunhloli Bebhizinisi | Martech Zone
Njengabakhangisi, sikhungathekile ngemininingwane. Izolo nje bengisungula umbiko wenqubekela phambili we-SEO ongilethe kusuka ukulandelela isikhundla, Idatha ye-Webmasters, Idatha ye-Google Analytics futhi I-Hubspot ukufaka amamethrikhi ayisihluthulelo nokuqondanisa ukubikwa ukuqinisekisa ukuthi kunembile.
Izixazululo zeBusiness Intelligence (BI) bezilokhu zikhona esikhaleni seBhizinisi isikhashana futhi bekuvame ukufakwa kwamakhasimende / kweseva ngemijikelezo emide yokuqalisa… kwesinye isikhathi iminyaka. Isixazululo se-BI sizongenza ngikwazi ukukhipha idatha kusuka kulolo nalolo hlelo bese ngakha indawo yokugcina ephakathi ehlunga, eguqula futhi yethule imininingwane ngefomethi esetshenziswayo.
I-GoodData iyiSoftware njengeService Business Intelligence Software enekhono lokuletha izinto ezihlukile zedatha, ukubhucunga leyo datha, nokusebenzisa amadeshibhodi, izinkomba zokusebenza ezibalulekile (KPIs) nokubika. Nali ikhasimende likhuluma nokusetshenziswa kweGoodData ukuthuthukisa imibiko namamethrikhi kalula. Qiniseka ukuthi uyaphuma Isiteshi seGoodData se-Youtube - ukuhlinzeka ngamathani ama-webinars nezethulo zendlela yokusebenzisa ngokuphelele ipulatifomu yabo.
Njengoba kubhalwe ku- ikhasi lezici, nazi izici ezibalulekile zeGoodData:
Amadeshibhodi Nemibiko - Bona ngeso lengqondo idatha yakho ngemibiko ekheniwe ngokugcwele noma enamandla kanye namadeshibhodi usebenzisa amathebula we-pivot noma amashadi. I-pivot endizeni nge-flick yegundane. Chaza izifanekiso zokufomatha ezijwayele ukwenziwa kanye nezilawulwa ngomthetho, ukubhoboza ungene kumaseli noma kuwo wonke, chaza ukuhlanganiswa kwamakholomu ngemizuzwana, thola izibalo zesifunda sespredishithi osheshayo ngokugqanyiswa kwegundane, hudula bese ulahla ukulungiselelwa kwama-axis eshadi futhi ulawule ukujikeleza kwelebula ngakunye.
Amamethrikhi nezinkomba zokusebenza ezisemqoka - IGoodData ivumela abasebenzisi ukuthi basebenzise amandla enqwaba yamamethrikhi achazwe ngaphambilini. IGoodData nayo ingakha amamethrikhi angokwezifiso abhekana nezimo zebhizinisi ezihlukile, ichaze ama-KPI futhi ilandele ukusebenza ngokuqhathaniswa nezinhloso.
Ukuhlaziywa kwe-Ad Hoc - Yenza ukuhlaziywa okuhamba phambili kuzifinyezo ezenzelwe isikhathi. Idatha yesilayidi nedayisi usebenzisa isikhombimsebenzisi esibonakalayo sokuthi “yini nokuthi kanjani” futhi uchaze imethrikhi yangokwezifiso neyomhlaba / yendawo, izihlungi nokunye okuningi. Sebenzisa umsizi wesihlungi ukufaka ngokuzenzakalela okokuhlunga kokukhetha, ukukala, ububanzi noma okokuguquguquka. Yenza ukuhlaziywa okungathiwani ngokuzulazula okuqondisiwe noma wehle phansi futhi ungcolile ngolimi olunamandla kodwa olufundekayo olunamacala amaningi.
Ukusebenzisana nokwabelana - Hlanganyela futhi wabelane ngamaphrojekthi, imibiko kanye nemiphumela nozakwethu nabaphathi ngesikhathi sangempela. Landelela futhi uhlole umlando wephrojekthi. Chaza futhi umake imibiko ngempukane. Mema abantu kumaphrojekthi akho ukuze baxoxe futhi babelane ngenqubekela phambili. Khuthaza ukubamba iqhaza ngesikhathi sangempela. Shumeka noma thumela imibiko nge-imeyili namadeshibhodi usebenzisa uhlu lokusabalalisa.
Izinhlelo Zokusebenza Ezakhelwe Ngaphambili - Izinhlelo zokusebenza zeGoodData zixhuma ngokuzenzakalela nemithombo yedatha ejwayelekile efana neGoogle Analytics, iSalesforce neZendesk, futhi njengoba zonke zakhiwe kungxenyekazi yeGoodData, ungazinweba kalula ngokungeza idatha noma ukwenza ngokwezifiso amamethrikhi akhombisa izidingo zebhizinisi lakho ezihlukile.
Uma unobuchwepheshe obuku-inthanethi obunedatha, ungaba futhi i- umlingani wedatha neGoodData. IGoodData inikeza amandla okwenza okugcwele analytics umkhiqizo emakethe kungakapheli izinsuku ezingama-90 ngaphandle komzamo omkhulu wobunjiniyela. Amakhasimende akho athola ukufinyelela okugcwele kuwo wonke amapulatifomu eGoodData: amadeshibhodi akhiwe ngaphambilini, ukubonwa okuthuthukile, ucezu nedayisi, amamethrikhi angokwezifiso, ukusebenzisana nokuningi.
Tags: bikwezamabhizinisigooddataUkumaketha iWebinarsaasisoftware njengensizakalo
Kungani uFacebook Engayinqumi nje